Gore iri rave kuve green technology uye inogona kunge iri hwaro hwekuvandudza kushanduka kwemamiriro ekunze | Linux Vakapindwa muropa
Gore iri rave kuve green technology uye inogona kuve hwaro hwekuvandudza kushanduka kwemamiriro ekunze
Chidzidzo chevanoongorora vashanu veNorthwestern University, UC Santa Barbara uye United States Dhipatimendi reMagetsi, yakaburitsa izvozvo pakuverenga yakagadzirwa mukati dzazvino dhata nzvimbo dzakawedzera simba radzo rekushandisa ne6 chete% pakati pa2010 na2018.
Nezve izvi zvinotizivisa kuti aya madata nzvimbo cMaawa makumi maviri nemashanu terawatt Zvemagetsi, izvi zvinomiririra 1% yenyika inoshandiswa emagetsi emagetsi, chiyero chakaenzana neya2010. Zvese izvi zvinodzikira mukuwana mu data centre kunyatsoshanda, nekuda kwekuvandudzwa kwesimba rekuita uye kutama kune gore komputa.
Kunyangwe chidzidzo ichi chichipokana nezvimwe zvisaruro uye zvitendero zvekuti nzvimbo dzematare dzinosiya kabhoni tsoka inowirirana neiyo indasitiri yendege.
Sezvo nyanzvi zhinji dzakataura makore apfuura iyo data centre simba rekushandisa rinofanira kupeta kaviri pamakore mana, izvo zvaizotungamira mukukwikwidzana katatu kwepasirose simba remagetsi kushandiswa kwenzvimbo idzi mumakore gumi chete, asi zvinoita sekunge ne data idzva yechidzidzo chakaburitswa gore rino ivo vari pazasi pazviyero izvi.
Sekureva kwemumwe wevanotsvagurudza vakaita chidzidzo mugore rino 2020, Jonathan Koomey, iyo yakapamhidzirwa yekuwedzera kwedhata inotungamira mukushandiswa kwemafungidziro ekukura kweramangwana mukushandiswa kwesimba kwenzvimbo yedata ine tsvete, nzira iyi haitore. mukutarisa simba rekubudirira kwesimba.
Izvo hazvifanire kurambwa kuti izvi zvishandiso, kunyangwe zvichidya simba rakawanda kupfuura makore gumi apfuura, ikozvino zvoita zvakawanda kuverenga kune yega-watt-awa yakashandiswa, mukuwedzera mukufunga izvo neiyo huru exponential kufambira mberi muma processor, nguva imwe neimwe inoshanda kuitira kuti simba rako rekushandisa riderere.
Zvechokwadi, yazvino dhata nzvimbo yezvivakwa masisitimu, kunyanya maererano nekutonhora uye simba, iwo anoshanda zvakanyanya kupfuura pakutanga.
Izvo zviri kutaurwa, kudzikiswa kwesimba rakadyiwa semhedzisiro kwakakwanira kudzikisa kuwedzera kwesimba kwesimba kushandiswa kweaya makomputa zvigadzirwa.
Izvi zvinonyanya kunetsa gore data data nzvimbo izvo parizvino zvinogamuchira 89% yemakomputa zviitiko, nepo muna2010, 79% yemakomputa epasi zviitiko aive munzvimbo dzechinyakare dhata.
Parizvino, kune hukuru kutamira kune zvitsva zvivakwa yakaitwa nevanopa gore, seGoogle Cloud, Amazon Web Services, uye Microsoft Azure. Ikozvino zvinoitika kuti zvekushambadzira zvinoshandiswa gore dhata data nzvimbo zvakagadziriswa zvakanyanya kwesimba rekuita kana ichienzaniswa nedata nzvimbo anoshanda ega nemakambani.
Kuburitswa kweichi chidzidzo chitsva kubva gore rino 2020 mumagazini Sayenzi kunouya panguva chaiyo iyo iyo European Union (EU) inoronga kumisikidza mwero wekushandisa simba kune vanoshanda vanochengeta nzvimbo dzemadhora muEurope. Naizvozvo, vanopa izvi vanoda kuti EU ikurudzire makambani kusiya zvivakwa zvavo zvekare kuti vatamire kunzvimbo dzekutengesa.
Urs Hölzle, mutevedzeri wemutungamiriri wehunyanzvi hwekuvaka kuGoogle, anoti:
Semuenzaniso, Google data data nzvimbo dzinoshanda zvakapetwa kaviri senge magetsi echinyakare. Pamusoro pezvo, Hölzle anoti Google parizvino inopa simba rinowanda kakapetwa kanomwe pasimba rakaenzana remagetsi iro nzvimbo dzaro dhata dzakadya makore mashanu apfuura.
Izvi zvinoenda kunoshanda zvakanyanya inesimba inoita kunge yakapararira kumakambani makuru Internet, kusanganisira, semuenzaniso, Facebook uye Apple. A) Hongu, vaive nepfungwa yekuisa yavo data nzvimbo kumatunhu ane kutonhora mamiriro ekunze kudzikisira zvakanyanya kushandiswa kwesimba kunodiwa kutonhodza zvivakwa.
Izvi zvakare zvinofambisa kushandiswa kwesimba rinowedzerwazve kune izvo zvasara zvinodiwa zveaya data nzvimbo. Chero zvazvingaitika, iko kusimuka kwekugadziriswa kwedata kumasevhisi emagetsi ndeimwe yemazano makuru eichi chidzidzo che2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Gore iri rave kuve green technology uye inogona kuve hwaro hwekuvandudza kushanduka kwemamiriro ekunze
Purism inoti malaptop ayo haana kukanganiswa neIntel yekupedzisira kunetseka
Zvirongwa zvemusangano wevhidhiyo. Dzimwe sarudzo dzakavhurika sosi dzekushandisa kwemakambani